Otu esi etinye Python 3.10 na AlmaLinux 8 - LinuxCapable
October 13, 2021 October 11, 2021 by Jọshụa James
Maka ndị ọrụ yana ọkachasị ndị mmepe chọrọ ịnwale ntọhapụ ọhụrụ Python, ị ga-ama Otu esi etinye Python 3.10 na Almalinux 8.
Nhọrọ mbụ bụ ịwụnye Python 3.10 site na isi mmalite. Nke a bụ usoro kwụ ọtọ, ọbụlagodi na nchịkọta sitere na isi mmalite. Nke mbụ, ị ga-achọ ịwụnye ihe ndabere dị mkpa iji wuo Python 3.10:
Dị ka ị pụrụ ịhụ, anyị nwere 2 cores, otú na (mee) iwu, otú (-j 2) a na-eji isi ihe abụọ ahụ eme ihe.
Python's venv modul bụ ebe a na-ahụ anya bụ ebe Python dị ka onye ntụgharị Python, ọba akwụkwọ, na script etinyere n'ime ya dịpụrụ adịpụ site na ndị e hibere na mpaghara ndị ọzọ mebere, na (na ndabara) ọba akwụkwọ ọ bụla arụnyere na sistemụ arụmọrụ gị, dịka ọmụmaatụ, ndị etinyere na sistemụ arụmọrụ AlmaLinux gị ka ịzenarị esemokwu na ịkpaghasị gburugburu ebe nrụpụta gị.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye Python 3.10 maka AlmaLinux 8 wee mepụta gburugburu mebere ngwa ngwa. N'ozuzu, Python 3.10 ka dị mma, yabụ ịrapara na Python 3.9 nwere ike bụrụ ihe na-achọsi ike maka oge a. Maka ndị chọrọ ịnwale Python ọhụrụ, 3.10 kwesịrị itinye ego iji wụnye.
Categories AlmaLinux Tags AlmaLinux, Python Mail igodo